Yintoni umqhubi wevidiyo? - Faq
Eyona > Faq > Umqhubi wevidiyo ohamba yedwa-iimpendulo ezilula kwimibuzo
Umqhubi wevidiyo ohamba yedwa-iimpendulo ezilula kwimibuzo
Yintoni umqhubi wevidiyo?
UKUYAividiyoumbonisoumlawuliivelisa iziphumo zokubeka esweni ikhompyuter kwaye ifuna ifayile yeumqhubi wevidiyoukunxibelelana nesixhobo ngebhasi yekhompyutha okanye indlela esezantsi yonxibelelwano apho izixhobo zekhompyutha zidibana khona.
Ndisilungisa njani isilawuli sevidiyo kuMphathi weDivayisi?
Landela la manyathelo:
KwiUmlawuli wesixhoboCofa ekunene kwiisixhobokwaye ukhethe Khipha kwimenyu yokuma.
Iwindow ephumayo iya kukucela ukuba uqinisekise ukungafakwa. Cofa Kulungile iqhosha ukugqibezela.
Qala kabusha ikhompyuter yakho kwaye iiWindows ziya kufaka ifayileumqhubingokuzenzekelayo.
Ndibenza njani abaqhubi abalawula ividiyo?
Ukuqinisekisa ukuba uphumeleleumqhubiufakelo:
Yiya kuMphathi weDivayisi.
Cofa kabini i-Intelisilawuli semizobo.
Qinisekisa iUmqhubiVersion kunyeUmqhubiUmhla uchanekile.
Ndiwuhlaziya njani umqhubi wevidiyo yam?
Hlaziya abaqhubi bamakhadi emizoboKwiWindows 7
Cofa ekunene kwiKhompyuter icon kwi-desktop yakho, kwaye ukhethe iiProperties.
Yiya kwiAudio,Ividiyokunye noMdlaloUmlawuli.
Nqakraza kabini ekungeneni kweyakhoikhadi lemizobokwaye utshintshele kwiUmqhubiithebhu.
Khetha uPhendlo ngokuzenzekelayoUmqhubi ohlaziyiweyoisoftware.
Ndingamkhuphela phi umlawuli wevidiyo Windows 10?
Yiya kwiwebhusayithi yomenzi wekhadi levidiyo okanye kwi-PC yakho okanye kwisiza somenzi weelaptop kwaye ufumane kwaye ukhuphele umqhubi wevidiyo olawulayo weWindows 10. Qiniseka ukuba umqhubi omkhethileyo uyahambelana nenkqubo yakho yokusebenza. Oko kukuthi, i-32-bit Windows 10 abasebenzisi kufuneka bakhuphele umqhubi elungiselelwe i-32-bit Windows 10, hayi i-64-bit.
Uyilungisa njani into yokulawula ividiyo ngaphakathi Windows 10?
Lungisa umba woLawulo loMqhubi weVidiyo ngaphakathi Windows 10 ngokulula! 1 KuMphathi weSixhobo, cofa ekunene kwisixhobo kwaye ukhethe Khipha kwimenyu yokuma. 2 Iwindow ephumayo iya kukucela ukuba uqinisekise ukungafakwa. Cofa Kulungile iqhosha ukugqibezela. Ukuba ubona ibhokisi ecaleni kwe ... 3 Qala kabusha ikhompyuter yakho kwaye iiWindows ziya kufaka umqhubi ngokuzenzekelayo. Kaninzi ...
Ndikhuphela phi Windows 10 umqhubi wekhadi levidiyo?
Khuphela kwaye ufake umqhubi ngesandla. Yiya kwiwebhusayithi yomenzi wePC okanye iwebhusayithi yomenzi wekhadi levidiyo ukhuphele umqhubi womboniso weWindows 10. Ukuba usebenzisa ikhompyuter enophawu, kuyacetyiswa ukuba uye kwiwebhusayithi yomenzi wePC kuqala, njengoko benokwenza umqhubi ngokwezifiso.
Ndiwuhlaziya njani umqhubi wekhadi lam levidiyo?
Hlaziya umqhubi ngesandla Yiya kwiwebhusayithi yomenzi wekhadi levidiyo okanye kwi-PC yakho okanye kwisiza somenzi weelaptop kwaye ufumane kwaye ukhuphele umqhubi wevidiyo olawulayo weWindows 10. Qinisekisa ukuba umqhubi omkhethileyo uyahambelana nenkqubo yakho yokusebenza.